Senziwe eSpain - eSpain ngezinzwa ze-5
Kuhlale isikhathi esihle sokuba iwayini elimhlophe noma i-rosé, kodwa ilanga nokushisa okulandelayo
Usuku lukaBaba lusondela futhi futhi nethuba lethu lokunikeza isibonakaliso esincane sokubonga kumuntu ngaphezulu
Amawayini aseSpain e-Bierzo ayadingeka kakhulu emhlabeni wonke, futhi akuyona nje ifoni
U-Hannibal wayengumqondisi omkhulu waseCarthage, owaziwa ngokuba omunye wezigaba ezinhle kakhulu emlandweni, ikakhulukazi wakhe
Kuthunyelwe ku-On 21 Mashi, i-2019 21 Mashi, i-2019 By HBamazwana
Kuyisikhathi esihle isikhathi sokuba iwayini elimhlophe noma i-rosé, kodwa ilanga nokushisa okwenziwe umthombo wamanzi entwasahlobo oseqalile namuhla kwenza iwayini elipholile phakathi kwezinto ezihamba phambili. Futhi ingukuthi ukudla okungelona ilanga nabangani, i-22 - 24 degrees ecebile futhi ingilazi ye-Albariño ngempela Qhubeka ufunda
Isigaba: Ama-Wineries/Ahlukanisiwe/Amawayini aseSpain
Kuthunyelwe ku-On 12 Mashi, i-2019 12 Mashi, i-2019 By HBamazwana
Usuku lukaBaba lusondela futhi futhi nethuba lethu lokunikeza isibonakaliso esincane sokubonga kumuntu obaluleke kakhulu ekuphileni kwethu. Lowo muntu ohlale ekhona nathi futhi ngubani okukhulunywa ngaye kokubili futhi ngokusemthethweni. I hero, nomaphi lapho ubheka khona. Qhubeka ufunda
Isigaba: Amawayini aseSpain/Ukuvakashelwa okuphoqelekile eSpain
Kuthunyelwe ku-On 16 February, 2019 16 February, 2019 By HBamazwana
Iwayini le-Bierzo le-Spanish liyadingeka kakhulu emhlabeni jikelele, futhi akuyona nje ifoni njengoba isihloko sithi. Ama-marshal yamagilebhisi akwaMencía asewutholile ngokusekelwe kokwazi ukuthi baye bawazisa kanjani izizukulwane. I-Vinos del Bierzo ibonakala ngokuphakama okuvamile, ngokweqile Qhubeka ufunda
Siyakwamukela Senziwe eSpain Magazine, indawo lapho uzothola khona lonke ulwazi mayelana nemikhiqizo emihle kakhulu yaseSpain efana newayini, izinyosi, i-Iberia, amafutha omnqumo, njll. Izingosi ezingavamile ukuvakashela, abanikazi babo, ukukhushulwa okuhle, ukudlala ku-Gran Vía nokunye okuningi. Senziwe eSpain Qhubeka ufunda